प्रविधि – Page2– Banking Khabar
आईपिओ जारी गर्ने पहिलो पे.टि.भि. बन्दै डिसहोम
बैंकिङ खबर । डिस मिडिया नेटवर्कले आगामी आर्थिक बर्षमा आईपिओ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको ९औं बाष्र्बिाक साधारणसभाले आफ्नो कुलजारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गर्ने भएकोे हो । साधारणसभाले यस अघिकै संचालक समितिलाई आगामी ४ बर्षका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । संचालक समितिको अध्यक्षमा हेमराज ढकाल चयन
जानिराखौं एटिएमको सुरुवात र प्रयोग
बैंकिङ खबर । एटिएम अर्थात अटोमेटेड टेलर मेसिन, बैंकिङ कारोबारका लागि भरपर्दो र आधुनिक प्रयोग हो । बैंकहरुको कारोबार एटिएम मेसिको प्रयोगपछि निकै सहज बनेको छ । ग्राहकरुलाई बैंकसम्म पुग्नु नपर्ने र सुरक्षित पनि भएकाले विश्वभर यसको प्रयोग बढेको छ । नेपालमा पनि यसको प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको संख्या बढ्दै छ । डेविट कार्डबाट रेस्टुराँ, सपिङ
तराईका चार विद्यालयमा डिशहोमद्धारा शैक्षिक सामाग्री वितरण
बैंकिङ खबर । डिशहोमले विपन्न परिवार तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक समाग्री वितरण गरेको छ । कम्पनीले रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाको चार विद्यालयका विपन्न परिवार तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री सहितका साथै झोला र न्यानो टोपी वितरण गरेको हो । कम्पनीले रौतहट जिल्लाको गौरमा रहेको श्री अधारभुत विद्यालय बालमन्दीरका विपन्न परिवार तथा जेहेन्दार ६० जना
वाणिज्य बैंकका एटिएम तीन हजार बढी : कुनको कति ?
बैंकिङ खबर । अटोमेटिक टेलर मेसिन नै एटिएम हो । एटिएमलाई अन्तराष्ट्रिय बैकिङ भाषामा प्लाष्टिक मनी भनिन्छ । यस कार्डले खल्तीमै पैसा हाले सरह काम गर्दछ । विकसित मुलुकहरुमा यसको प्रयोग बढ्दो रुपमा भएको छ भने नेपालमा सिमित मात्रामा भएको पाईन्छ । एटिएमबाट आफुले बैंकमा जम्मा गरेको रकम चाहेको समयमा छिटो तरिकाले झिक्न सकिन्छ ।
बैंकमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा मोबाइल बैंकिङ लोकप्रिय बन्दै
बैंकिङ खबर । हरेक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढदै गएको छ । मानिसहरुको व्यस्तता र इन्टरनेटको पहुँच बढदैजाँदा आफुलाई प्रविधिमा अध्यावधिक गराउँदै लगेका छन् । पछिल्लो एक दशक यता नेपालमा पनि सबै क्षेत्रमा प्रविधिले फडको मारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको विकास गरिरहेका छन् । अनलाइनबाट खाता,
बैंकिङ खबर । सहारा विकास बैंकले विद्युतीय चेक क्लियरिङ र अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी सेवा दिने भएको छ । उक्त सेवा संचालन गर्नका लागि बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउससँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिनयकुमार शाह र नेपाल क्लियरिङ हाउसका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन्
बार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सुविसुले ल्यायो तीन नयाँ अफर
बैंकिङ खबर । सुबिसु केबलनेट प्रा. लि.,नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसर सुबिसुले भयंकर अफर प्रस्तुत गरेको छ । जसमा रिटेल ग्रहाकहरु का लागि क्लियर टि.भि, इन्टरनेट तथा इन्टरनेट र क्लियर टिभि सेवाम फरक फरक आकर्षक अफरहरु ल्याएको छ । क्लियर टिभि प्रिमियम प्याक अफर क्लियर
नबिल बैंक पनि connectIPS e-Payment मा आवद्ध
बैंकिङ खबर । नेपाल क्लियरिङ हाउसले संचालमा ल्याएको connectIPS e-Payment प्रणालीमा नविल बैंक लिमिटेड पनि आवद्ध भएको छ । पुस १० गते बाट कारोबार शुरु गर्ने गरि नबिल बैंकलाई उक्त प्रणालीमा आवद्ध गराएको हो । बैंकका ग्राहकहरुले यस प्रणालीको www.connectips.com अथवा मोबाईल एप्सबाट अनलाईन कारोबार गर्न सक्नेछन् । यस प्रणालीमा बैंकका ग्राहकले आफूलाई एक पटक
पे टि.भि इण्डष्ट्रिमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेमा ‘डिस मिडिया नेटवर्क’
बैंकिङ खबर । डिसहोम मिडिया नेटवर्कले संचालनमा आएको नौ वर्षमा चार अर्ब १० करोड ९१ लाख दुई हजार दुई सय १३ रुपैयाँ कर बुझाएको छ । डिसहोमले आर्थिक वर्ष २०७४।७५सम्ममा विभिन्न शिर्षकमा उक्त कर नेपाल सरकारलाई बुझाएको हो । जसमध्ये, भन्सारतर्फ ८७ करोड २० लाख ११ हजार ७८ रुपैयाँ, ग्राहकहरुबाट संकलित मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ दुई
हेर्नुस् : प्रचलनमा रहेका बैंकिङ सफ्टवेयरहरु, कसरी गरिन्छ प्रयोग ?
बैंकिङ खबर / बैंक संचालनका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेरहरुको पनि क्रमशः विकास भइरहेको छ । सुृरुमा कागजी रुपमा रजिष्टरमा गरिने हिसाबकिताब अब कम्प्युटरमा गर्न थालिएको छ । यसका लागि पनि छुट्टा छुट्टै सफ्टवेयरको विकास गरिएको छ । यसबाहेक पनि आवश्यकताअनुसार, बैंकिङ सफ्टवेयरहरुको प्रयोग भइरहेको छ भने थप भित्रिने क्रममा पनि रहेका छन् । सिविएस : नेपालका
नयाँ मुख्यालय बनाउन एक खर्ब बढी खर्चिँदै गुगल
बैंकिङ खबर । गुगलले नयाँ मुख्यालय (अफिस क्याम्पस) बनाउनका लागि एक अर्ब डलर अर्थात् करिब एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्ने भएको छ । ‘गूगल हडसन स्क्वायर नाक रहने यो मुख्यालय १७ लाख वर्ग फिटमा बन्नेछ । मूख्यालयमा दुईवटा भवन हुनेछ । सन् २०२० सम्ममा मुख्यालयको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
नेपाल टेलिकमले ५५.५५ प्रतिशत लाभांश दिने
बैंकिङ खबर । नेपाल टेलिकमले ५५.५५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । टेलिकमको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त अनुपातमा नगद लाभांश दिने प्रस्ताव अघि सारेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल सरकार र सधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीले पाउने छन्। कम्पनीले विगत सात वर्षदेखि प्रति शेयर ४५ रुपैयाँ भन्दाबढी लाभांश दिँदै आएको छ। गत
सिटीसी मोबाइल मेला : ल्यापटप तथा एप्पलका ग्याजेट्स किस्ताबन्दीमा किन्नेको भिड
बैंकिङ खबर । सिटीसी मल सुन्धारामा रहेको सिटीसी मोबाईल हबले मंसिर २० गतेदेखि संचालनमा ल्याएको मोबाइल एक्सचेञ्ज मेलामा ग्राहकहरुको भिड लागेको छ । ल्यापटप, क्यामेरा एप्पलका ग्याजेट्स सुपथ मूल्यमा किस्ताबन्दीमा पाइने भएपछि ग्राहकहरुको भिड बढेको हो । ग्याजेट पारखीहरुले एक्सचेञ्ज मेलामा आफुलाई मन परेको मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा तथा एप्पलका आईफोन, आइप्याड, म्याक लगायतका उत्पादन किस्ताबन्दीमा
बैंकिङ खबर । सुन्धारामा रहेको सिटीसी मोबाईल हबले मंसिर २० गतेदेखि मोबाइल तथा ल्यापटप मेला सुरु गर्ने भएको छ । ग्याजेट पारखीहरुललले किस्ताबन्दीमा आफुलाई मन परेको मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा तथा एप्पलका आईफोन, आइप्याड, म्याक लगायतका उत्पादन किस्ताबन्दीमा किन्न पाउने भएका छन् । उक्त मेलामा मोबाईल एक्सचेञ्ज अफरका साथै एउटा मोबाइल किन्दा अर्को मोबाइल सित्तैमा अफर
पूर्णिमा विकास बैंक पनि कनेक्ट आईपिएसमा आवद्ध
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको कनेक्ट आईपिएस ईपेमेन्ट प्रणालीमा पूर्णिमा विकास बैंक पनि आवद्ध भएको छ । बैंकका ग्राहकहरुले यस प्रणाली मार्फत आफ्नो बैंक खाताबाट अनलाईन प्रति कारोबार एक लाख रुपैयाँसम्म र मोबाईल एप्स मार्फत प्रति कारोबार पाँच हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी कारोबार गर्न सक्नेछन्